Tips on Making Big Decisions
Career Advice Help & Support Management Upgrade Yourself
ဘဝတှငျမွောကျမွားစှာသော ဆုံးဖွတျခကျြသေးသေးမြားထဲမှအရေးပါသောဆုံးဖွတျခကျြတဈခြို့သညျ လူတဈယောကျရဲ့ဘဝလမျးကွောငျးပျေါတှငျကွီးမားသောဆုံးဖွတျခကျြခရြနျအောကျပါနညျးလမျးကောငျးမြားနှငျ့ သငျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုကို ပိုပွီး ယုံကွညျခကျြရှိရနျ အောကျပါအခကျြမြားကို ဖျောပွပေးထားသညျ။
(၁) ဆုံးဖွတျခကျြ၏အကြိုးသကျရောကျမှုက ဘာလဲ။
သငျ့ဆုံးဖွတျခကျြ၏ အကြိုးသကျရောကျမှုကို အကဲဖွတျရနျ အရေးကွီးသညျ။ သငျကိုယျတိုငျ မေးခှနျးပွနျမေးခွငျးဖွငျ့လညျးကောငျး တဈနညျးအားဖွငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြသညျ သငျ့ဘဝတှငျ ဘယျလောကျထိ (သို့မဟုတျ) ဘယျခြိနျထိ သကျရောကျနိုငျလိမျ့မလဲ။ သငျ့ရဲ့မိသားစု၊ လူမှုပတျဝနျးကငျြကို ဘယျလိုသကျရောကျနိုငျလိမျ့မလဲ။ ဘယျလောကျကွာကွာဆုံးဖွတျခကျြခရြနျလိုအပျသလဲ။
(၂) သတျနိုငျသမြှသငျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြအကွောငျး သတငျးအခကျြအလကျကို စုဆောငျးပါ။
သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့လူကိုမေးပါ။ သငျ့ရဲ့သူငယျခငျြးတှကေို မေးပါ။ တဈခွားလူတှကေိုမေးပါ။ ဂိုလျဂယျ မှာရှာပါ။ ဖွဈနိုငျခရြှေိသော သတငျးအခကျြအလကျကို စုစညျးပါ။ အဤ၍သငျဟာ နိုငျငံခွားပညာတျောသငျသှားရနျ စီစဉျနလြှေငျ သငျအခကျြအလကျမြားကို ရှာဖှခေငျြနရေမညျ။ နထေိုငျစရိတျ၊ သငျတနျးကာလ၊ ပညာတျောသငျထောကျပံ့ကွေး ရနိုငျနိုငျခမြေား ကဲ့သို့သောအရာမြား စသညျဖွငျ့ ဖွဈသညျ။ အဤ၍သငျဟာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအတှကျ ရှာဖှနေလြှေငျ သငျ့ရဲ့လကျရှိ အသကျမှေးသကျမှေးဝမျးကွောငျးမှာ ဘယျသူတှရှေိနလေညျး ပွီးတော့ သငျမြှျောလငျ့နတေဲ့အလုပျအလုပျမှာတှလေညျး ဘယျသူတှရှေိနလေညျးဆိုတာကို မေးပါ။ သငျလုပျရမညျ့ဆုံးဖွတျခကျြအတှကျ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ပိုပွီးအသေးစိတျကလြလေေ တောငျးဆိုမှုကို လကျခံရမလား (သို့မဟုတျ) ငွငျးဆိုရမလားဟု ဆုံးဖွတျရာတှငျပိုပွီး မှနျကနျလဖွေဈသညျ။
(၃) သငျစုဆောငျးရရှိထားသော သတငျးအခကျြအလကျမြားကို သငျဆုံးဖွတျခကျြခရြာတှငျ ငွငျးပယျရမလား(သို့မဟုတျ) လကျခံရမလားဟု ဆုံးဖွတျခကျြခရြာတှငျ အသုံးခပြါ။အောကျပါဖွဈနိုငျသော ဆုံးဖွတျခကျြ၏ အားသာခကျြနှငျ့ အခကျအခဲကို စာရငျးပွုစုပါ။
အတှအေ့ကွုံ့၊အသိပညာနှငျ့သငျစုဆောငျးထားသော အခကျြအလကျမြားကို စုပွီးသငျ့အတှကျအသုံးဝငျသောအားသာခကျြ နှငျ့ အခကျအခဲမြားကိုစာရငျးပွုစုပါ။ သငျဆုံးဖွတျခကျြခရြာတှငျရှိလာနိုငျသောအတားအဆီးမြားကို ဆုံးဖွတျပွီးနောကျ ထိုအရာကို ဘယျလိုကြျောဖွတျနိုငျမလဲ ဆိုတာကို တှေးပါ။ အဲ့သညျလိုလုပျရာတှငျလညျး သငျလုပျနိုငျစှမျးရှိသလို ရိုးရိုးသားသားလုပျဆောငျပါ၊တတျနိုငျသမြှတိတိကကြ လုပျဆောငျပါ။ ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျရာတှငျ ရညျမှနျးခကျြထားရှိပါ။
(၄) သတငျးအခကျြအလကျကို စုဆောငျးခွငျးနှငျ့ သငျ့ဆုံးဖွတျခကျြရဲ့အကြိုးဆကျမြားကို ပွနျလညျသုံးသပျခွငျးအဆငျ့မြားပွီးနောကျ ယခုသငျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို ခရြနျအခြိနျဖွဈသညျ။
သငျ့ရဲ့မိဘ၊ဆရာ(မ)မြား၊သူငယျခငျြးမြားနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြမှ လှမျးမိုးမှုတှေ၊ဖိအားပေးမှုတှေ၊စိတျအားထကျသနျမှုတှေ၊ စိတျပကျြအားလြှော့ခွငျးတှေ ခံရစဉျမှာတဈတညျးတဈခွားတညျးဖွဈပါစေ။ သခြောသောဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျရနျသခြောသော လူတှဆေီမှ စိတျအားထကျသနျမှုကို ရရှိလာနိုငျသညျ။ သို့ရာတှငျ သတိထားရမညျ့အရာက ဘဝနှဈခုသညျ တူညီတယျဆိုတာ မရှိခွငျးပါဘဲ။ ထို့ကွောငျ့သငျသာလြှငျထိုရှေးခယျြမှုကို ပွုလုပျနိုငျပွီး ၎င်းငျးနှငျ့တညျနနေိုငျမညျ။
(၅) သငျဆုံးဖွတျခကျြခပြွီးနောကျ ဆကျလကျတာဝနျယူပါ။
ဆုံးဖွတျခကျြတိုငျးက ယခုသငျလြှောကျရနျ ရှေးခယျြပွီးနှငျ့သော လမျးကွောငျးတဈခုဆီသို့ ဦးတညျပေးလိမျ့မညျ။ ရညျရှယျထားသောအရာမြား ဖွဈမလာသောအခါတှငျတဈခြို့သောဆုံးဖွတျခကျြသညျ ပွနျပွောငျးနိုငျသညျ။ အခွအေနေ ဘယျလိုရှိနပေါစေ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ သငျကိုယျတိုငျတာဝနျယူထားသော သငျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို လကျခံဖို့အရေးကွီးတာပါ။ တာဝနျယူခွငျးကိုလကျခံခွငျးအားဖွငျ့ သငျသညျသငျဘဝတဈခုလုံးကို သငျကိုယျတိုငျထိနျးခြုပျနိုငျရနျ၊ ရှဆေ့ကျရနျ နှငျ့ နောကျပွနျဆုတျရနျ ပေးနသေညျ။ တဈဖနျရှေးခယျြမှုသညျ သငျကိုယျတိုငျလုပျရမညျ့ အရာဖွဈသညျ။
ဘဝတှငျကြှနျုပျတို့ပွုလုပျသော ရှေးခယျြမှုမြားရဲ့အပိုငျးတဈခုနှငျ့ မြှျောလငျ့ခကျြကွီးစှာဖွငျ့ အထကျတှငျဖျောပွထားသောအခကျြမြားသညျ သငျ့ရဲ့ဘဝတဈခုလုံးမှာ ပွုလုပျနသေော အရေးကွီးသော ဆုံးဖွတျခကျြခရြာတှငျ အထောကျအကူဖွဈစလေိမျ့မညျ။
စငျကာပူနိုငျငံရှိ နနျယမျနညျးပညာတက်ကသိုလျမှ ဇီဝဗပေညာရပျဆိုငျရာ သိပ်ပံဘာသာရပျတှငျ ဒေါကျတာဝငျ့ဝငျ့ဖူးသညျ Ph.D ဘှဲ့ရရှိထားသညျ။ ယခုလကျရှိ သူမသညျ စငျကာပူနိုငျငံရှိ သိပ်ပံ၊နညျးပညာ၊သုသတေနရဲ့အဂေငျြစီမှာ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးဖွဈရနျ ကွိုးစားနသေူဖွဈသညျ။
ဘ၀တွင်မြောက်မြားစွာသော ဆုံးဖြတ်ချက်သေးသေးများထဲမှအရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချို့သည် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အောက်ပါနည်းလမ်းကောင်းများနှင့် သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပိုပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရန် အောက်ပါအချက်များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။
(၁) ဆုံးဖြတ်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘာလဲ။
သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းပြန်မေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း တစ်နည်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သင့်ဘ၀တွင် ဘယ်လောက်ထိ (သို့မဟုတ်) ဘယ်ချိန်ထိ သက်ရောက်နိုင်လိမ့်မလဲ။ သင့်ရဲ့မိသားစု၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်လိမ့်မလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သလဲ။
(၂) သတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းပါ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကိုမေးပါ။ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မေးပါ။ တစ်ခြားလူတွေကိုမေးပါ။ ဂိုလ်ဂယ် မှာရှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သတင်းအချက်အလက်ကို စုစည်းပါ။ အဤ၍သင်ဟာ န်ိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားရန် စီစဉ်နေလျှင် သင်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေချင်နေရမည်။ နေထိုင်စရိတ်၊ သင်တန်းကာလ၊ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေး ရနိုင်နိုင်ချေများ ကဲ့သို့သောအရာများ စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ အဤ၍သင်ဟာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ရှာဖွေနေလျှင် သင့်ရဲ့လက်ရှိ အသက်မွေးသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်သူတွေရှိနေလည်း ပြီးတော့ သင်မျှော်လင့်နေတဲ့အလုပ်အလုပ်မှာတွေလည်း ဘယ်သူတွေရှိနေလည်းဆိုတာကို မေးပါ။ သင်လုပ်ရမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုပြီးအသေးစိတ်ကျလေလေ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံရမလား (သို့မဟုတ်) ငြင်းဆိုရမလားဟု ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပိုပြီး မှန်ကန်လေဖြစ်သည်။
(၃) သင်စုဆောင်းရရှိထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ငြင်းပယ်ရမလား(သို့မဟုတ်) လက်ခံရမလားဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အသုံးချပါ။အောက်ပါဖြစ်န်ိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်၏ အားသာချက်နှင့် အခက်အခဲကို စာရင်းပြုစုပါ။
အတွေ့အကြုံ့၊အသိပညာနှင့်သင်စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို စုပြီးသင့်အတွက်အသုံးဝင်သောအားသာချက် နှင့် အခက်အခဲများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ရှိလာနိုင်သောအတားအဆီးများကို ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ထိုအရာကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို တွေးပါ။ အဲ့သည်လိုလုပ်ရာတွင်လည်း သင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလို ရိုးရိုးသားသားလုပ်ဆောင်ပါ၊တတ်နိုင်သမျှတိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါ။
(၄) သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အကျိုးဆက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်များပြီးနောက် ယခုသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့မိဘ၊ဆရာ(မ)များ၊သူငယ်ချင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လွမ်းမိုးမှုတွေ၊ဖိအားပေးမှုတွေ၊စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ၊ စိတ်ပျက်အားလျှော့ခြင်းတွေ ခံရစဉ်မှာတစ်တည်းတစ်ခြားတည်းဖြစ်ပါစေ။ သေချာသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်သေချာသော လူတွေဆီမှ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ရရှိလာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သတိထားရမည့်အရာက ဘ၀နှစ်ခုသည် တူညီတယ်ဆိုတာ မရှိခြင်းပါဘဲ။ ထို့ကြောင့်သင်သာလျှင်ထိုရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းနှင့်တည်နေနိုင်မည်။
(၅) သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် ဆက်လက်တာဝန်ယူပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းက ယခုသင်လျှောက်ရန် ရွေးချယ်ပြီးနှင့်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်ပေးလိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ထားသောအရာများ ဖြစ်မလာသောအခါတွင်တစ်ချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိနေပါစေ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူထားသော သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံဖို့အရေးကြီးတာပါ။ တာဝန်ယူခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့် သင်သည်သင်ဘ၀တစ်ခုလုံးကို သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်၊ ရှေ့ဆက်ရန် နှင့် နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် ပေးနေသည်။ တစ်ဖန်ရွေးချယ်မှုသည် သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမည့် အရာဖြစ်သည်။
ဘ၀တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော ရွေးချယ်မှုများရဲ့အပိုင်းတစ်ခုနှင့် မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များသည် သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးမှာ ပြုလုပ်နေသော အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စင်ကာပူန်ိုင်ငံရှိ နန်ယမ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဇီဝဗေပညာရပ်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွင် ဒေါက်တာဝင့်ဝင့်ဖူးသည် Ph.D ဘွဲ့ရရှိထားသည်။ ယခုလက်ရှိ သူမသည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ သိပ္ပံ၊နည်းပညာ၊သုသေတနရဲ့အေဂျင်စီမှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည်။
Among life’s myriad of small decisions,afew significant decisions can have outsize impact on one’s path. Wynee provides the following tips to approach big decisions and to feel more confident in your choices:
It is important to evaluate the impact of your decision. You can do so by asking yourself questions such as “How long/how much will the decision have effect on your life?” “How will your decision affect your family/social circle?” “How soon do you need to make the decision?”
Gather as much information as possible about your decision.
Ask around. Ask your friends. Ask people. Ask google. Gather as much information as possible. If you are planning to study abroad, you might want to check out the facts such as cost of living, duration of studies, possibilities of scholarships, etc. If you are planning to switch careers, ask those who are in your current career as well as those who are in your prospective career. The more detailed information you have on the decision to be made, the more accurate you will be able to judge the pros and cons.
Apply the information you have gathered to estimate the pros and cons of your decision.
List down the possible advantages and setbacks of the decision.
Apply the knowledge/experiences/facts you have gathered to come up withalist of possible advantages and setbacks that are applicable to you. Determine the possible roadblocks in your decision and think about how to overcome them. In doing so, be honest with your capabilities and be as specific as possible. In making your decision, try to be objective.
After the steps of gathering information and evaluating the consequences of your decision, now it is time for you to make the decision.
Be independent in making your decision while acknowledging the influence / pressure / motivation / discouragement from your parents, your teachers, your peers, and the world. You may find inspirations from certain people to make certain types of decision. Nonetheless, know that no two lives are the same. Therefore, you and only you can make the choice and live with it.
After making your decision, be responsible.
Every decision will lead you toapath you now have chosen to walk on. When things don’t go too well, some decision may be easier to turn around while some will not be. No matter what the situation is, it is important to accept that you are solely responsible for your decision. In accepting the responsibility, you are giving yourself control over your life, either to push on or to turn around. Again, the choice is yours to be made.
Life isaseries of choices we make and hopefully the above-mentioned tips will be helpful to you in making important decisions along the way.
Dr. Wint Wint Phoo holdsaPh.D. in Biological Sciences from Nanyang Technological University, Singapore. Currently she is pursuing her passion in science asaresearch fellow in the Agency of Science, Technology and Research, Singapore.
Introduction to Myanmar Medical industry and career options.